Neymar Oo 4 Xiddig Oo Barcelona Ah Ku Casuumay Xaflada Dhalashadiisa & Sababta Ay Uga Qayb Qaadan Wayeen Oo La Ogaaday – Kooxda.com
Home 2018 February France, Spain, Wararka Maanta Neymar Oo 4 Xiddig Oo Barcelona Ah Ku Casuumay Xaflada Dhalashadiisa & Sababta Ay Uga Qayb Qaadan Wayeen Oo La Ogaaday
Neymar Oo 4 Xiddig Oo Barcelona Ah Ku Casuumay Xaflada Dhalashadiisa & Sababta Ay Uga Qayb Qaadan Wayeen Oo La Ogaaday
Xiddiga reer Brazil ee Neymar ayaa u dabaal degay dhalashadiisii 26-aad isaga oo xaflada weyn ku dhigtay kuna marti qaaday xiddigo badan oo ay ka mid yihiin xiddigaha Barcelona laakiin ayna ka ka qayb qaadan xaflada.
Wargayska Sport ayaa sheegay in uu Neymar ku marti qaaday xiddigihii hore ee ay isku kooxda ahaayeen laakiin ayna xiddigaha Barcelona ay seegeen xafladaas.
Sababta ay xiddigaha Barcelona ku seegeen ayuu wargayska ku sheegay in ay isku diyaarinayeen kulan kulankii Adkaa ee ay Axadii la ciyaareen ee ku dhamaatay bar-baraha 1/1 ah.
Xiddiga reer Brazil oo laba xafladood kala qabsaday Axadii iyo Isniintii ayay xiddigaha Barcelona seegeen sababo la xiriira kulamada ay ciyaarayeen.
Waxa uu caawa dhigan doonaa mid saddexaad laakiin xiddiga Barcelona ayaa mar kale seegi doona xafladaas maadama ay isku diyaarinayaan kulanka Semi-finalka ee ay khamiista la ciyaari doonaan Kooxda Valencia.
Waxa sidoo kale xiddigaha Barcelona ka hor istaagay in ay xafladaas tagaan sababo la xiriira dhanka jawiga oo xun oo aan lagu safri karin diyaarin.
Neymar ayaa xaflada ku marti qaaday xiddigaha Messi,Suarez,Coutinho iyo waliba daafaca Gerard Pique laakiin xiddigaha ayaan mar kale ka qayb qaadan doonin xaflada xiddiga reer Brazill.